Akpọrọ m Bloggards asị | Martech Zone
Akpọrọ M Bloggards Asị
Satọde, Ọgọstụ 26, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Seth nwere a post na saịtị ya nke chetaara m ka m dee ihe a.
Enwere m mmasị ịde blọgụ. Ma m kpọrọ asị ndị na-ede blọgụ. Ọ bụ okwu ọhụrụ m dere maka ndị na-ede blọgụ bụ ndị dị umengwụ na ịde blọgụ - mana ọ ga-eme ka ha gbanwee blog ọzọ, oge ụfọdụ okwu maka okwu. Ọ dị umengwụ, ọ makwaara izu ohi ebe ọ bụ na ihe nwere ike ime ya na ibe ha karịa blogger mbụ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere nkwupụta mmegide ma ọ bụ na-akwado nke ịchọrọ ịgbakwunye na mkparịta ụka ahụ - nke ahụ bụ ihe ịde blọgụ bụ! Nke ahụ bụ mkparịta ụka ahụ na blogosphere.
Ọ dịịrị onye na-ede blọgụ mfe ịgbalị ịdị ka ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ, naanị n'ihi na enwere ọtụtụ ntinye. Guzogide! - Seth Godin
Ọkwa ọzọ dị ala karịa ndị na-ede blọgụ bụ ndị nchịkọta. Ndị a bụ saịtị na-ehichapụ ọdịnaya gị ma tinye ya na saịtị ha. Ndị a na-aumụ scum bụ ndị nzuzu. Echere m na ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpụmkpụ nke imebi iwu. Chọpụta - ha nwere njikọ laghachi na ibe gị ebe izipụrụ, mana ha enwetala ego na ọdịnaya gị. Nke ahụ bụ ohi, larịị ma dị mfe.
Ọ bụrụ na ndị be anyị maara ka anyị ga - esi luso ọgụ a, biko kwuo okwu na nke a. Achọrọ m ka ọ kwụsị!
update: Copyblogger achọpụtala Bloggard. Nke a bụ mmejọ na usoro ntinye dị ka saịtị Telegraph.
update: Ezuru ọdịnaya Ajay D'Souza
Tags: content Marketingnwebisiinkana-edozi ọdịnayaezuru ọdịnayana-ewere ọdịnaya
Ọrụ Ndị Ahịa Dị Mfe
Inoffensive Clip-art: Achọghị Ndị Abụba
Aug 26, 2006 na 6:44 PM
Ikwesiri imelite ọkwa a n'oge na ihe atụ na-adịbeghị anya. Echere m ugboro ole ka edere akwụkwọ akụkọ na-enyocha blogger?
Aug 26, 2006 na 6:52 PM
Bloggards, aga m echeta nke ahụ.
M na-eme ọtụtụ ihe banyere nwebisiinka na ohi ọdịnaya na blọgụ ụwa, ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime ebe ndị m lekwasịrị anya.
Ọ bụ ihe ijuanya karịa. A na-atụ anya ụfọdụ ịkekọrịta na regurgitation mana ọ bụrụ na mmadụ agbakwunyeghị na ya, enwere mkpu. A na-atụ anya ka onye ọ bụla wuo, ọ bụghị naanị imeghachi ya.
N'ezie, ntinye bụ ihe achọrọ mgbe niile.
Nke ahụ bụ atụmatụ ahụ m na-ahụ. Enwere ike ịghara ikwenye.
Aug 26, 2006 na 7:07 PM
Jonathan, ekwere m na 100%!
Aug 27, 2006 na 5:38 PM
Amaghị m etu ọ ga-esi kwe omume ịlụ ọgụ ma ọ bụ ndị na-eme spam.
Aggregators nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na ị na-eji .htaccess. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka emere ndị a niile.
ndị na-ede blọgụ, enwere m obi abụọ, n'ihi na ha dị umengwụ mmadụ na-enweghị nsọpụrụ izuru ihe ndị ọzọ! X (
Sep 2, 2006 na 11:34 PM
Oh nwoke, ọzọ oké post 😀
N'oge na-adịbeghị anya, achọtara m saịtị nke na-edegharị akwụkwọ problogger.net nke ọma maka mkpụrụ okwu. Mgbe m laghachiri, ọ ga-ehichapụ ya niile, na-arịọ mgbaghara maka iji nchịkọta nchịkọta - wee laghachikwa na-edegharị saịtị ndị ọzọ ọzọ! Scum bastards = (
Dec 7, 2006 na 11:49 PM
Say na-asị, “Ọ bụ okwu ọhụrụ nke edere m…”
Ma, lee, mba!
'Bloggard' bu akara ahia nke Arthur Cronos, nke eji ya kemgbe otutu afo. Maka * mbụ *, ezigbo, * na * naanị * Adventures nke Bloggard, gaa na bloggard.com wee nweta scoop kwụ ọtọ.
N'ihe banyere nkwupụta ndị a i kwuworo, lee, ha ga-abụrịrị nkwutọ na-ekwu okwu ọjọọ, na-achọ ịlụ ọgụ, ma na-ekwu ihe ndị na-abụchaghị eziokwu, obi abụọ adịghị ya. Ma ejiri m n’aka na ị kwuru nke ọma.
Dec 7, 2006 na 11:55 PM
Ekwuru m ya n'ụzọ kachasị mma, Arthur! Obi dị m ezigbo ụtọ na:
1. Okwu a n’enweghị mgbe zuru oke!
2. so mara oke mma nke ụghalaahịa gị!
Ọ bụrụ na ị bụ Bloggard gọọmentị, enwere m ike ijide gị na anaghị m akpọ gị asị!
PS: Ebee ka m nwere ike ịhụ vidiyo nke onye na-egwu Mobius Megatar?
jason aja aja
Ọkt 28, 2007 na 4:21 AM
Ọfọn mgbe blog aggregators ga… (drum mpịakọta) bloggators (ezimezi oku, pandemonium, ngwa ngwa agwụ)!
Hmmm, naanị asaa posts maka bloggator, ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụghị ihe ọjọọ, na-enweta widdit mbụ